AH: August 2011
Posted by AH at 8/31/2011 04:08:00 PM 1 comments
Posted by AH at 8/31/2011 02:16:00 PM 1 comments
ဂျပန်က ထွင်လိုက်တာပါ။ သင့်ကလေးငယ် နဲ့အတူ အဖိုးတွေ အဖွားတွေဆီသွားလည်ရင် ကလေးတွေ စူစူပုတ်ပုတ်မျက်နှာကို သင် ပြင်ချင်ပါသလား? မပူပါနဲ့ ဒီစက်ကလေးကို ချိတ်ပြီး ခလုပ်ကလေးကို နှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ အလိုလိုနေရင်းကို ရယ်သွားစေရမယ်တဲ့။
အသုံးပြုပုံကတော့ မျက်မှန်တပ်သလို နားမှချိတ် ပြီးရင် ကျန်တဲ့ အပိုင်းကို မေးစေ့မှာ ချိတ်လိုက်ရုံပါဘဲတဲ့။ ပြီးရင်တော့ ခလုပ်နှိပ်လိုက်တော့…. လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေက မေးရိုးတစ်လျှောက်ကို ဆက်တိုက်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလျှပ်စစ်အားတွေက မေးရိုးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ကျုံစေပြီး ပြုံးအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားစေပါတယ်တဲ့။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို စိတ်ကောက်ပြီး မျက်နှာစူပုတ်ပုတ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းစူနေပါသလား… ဒါလေးကို တပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်အထက်လူကြီး ရှေ့မှာ မျက်နှာကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ သူ ဆူဆဲသမျှကို အောင့်အီးသည်းခံလိုပါသလား…. ဒါလေးကို တပ်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Source - Source 1
Posted by AH at 8/31/2011 10:32:00 AM0comments
လေ့လာမှတ်သား အင်ဂျင်နီယာလောကရဲ့ စကားများလို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းတော့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်နဲ့ သတ်ဆိုင်တဲ့ စကားစုလေးတွေပါ။
“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never we.”
“ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြသနာတွေကို မေးခွန်းထုတ်နေသူတွေ၊ ကလန့်တိုက်နေသူတွေ ဒါမှမဟုတ် အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေစတဲ့ မြင်တွေ့နေကျ သဘာဝလောက်ကိုသာ အဟုတ်ထင်နေတယ်လူတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လိုနေတာက ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမှ အိပ်မက်မမက်ဖူးတဲ့ အရာတွေကို တွေးမြင်နိုင်တဲ့ လူတွေကို လိုအပ်နေတာပါ”
ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ
Posted by AH at 8/30/2011 02:05:00 PM0comments
ဂျပန်နိုင်ငံက ကူချိုဖူကု ဆိုသူ တီထွင်လိုက်တဲ့ အဲကွန်း ဂျာကင်ပါ။ ပိုလီယက်စရာနဲ့ (ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ နိုင်လွန်သားလို့ခေါ်ကြပါတယ်) ချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဆိုဒ်အမျိုးအမျိုး ရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ထည်ချင်းစီမှာ လျှပ်စစ်အားသုံး ပန်ကာလေး ၂ ခုစီတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီပန်ကာလေးတွေက တစက္ကန့်ကို အမြန်ဆုံး အဆင့်မှာ လေ ၅ ငါလံကျော်ကျော် နည်းနည်းနှေးနှေးလေး ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် လေ ၃ ဂါလံကျော်ကျော် သွင်းပေးနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီဂျာကင်တွေကို ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၆ ၀န်းကျင်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဘက်ထရီနဲ့ အားသွင်းမယ့် ချာဂျာ တန်ဖို့ မပါဝင်သေးဘူးတဲ့။
Posted by AH at 8/30/2011 11:14:00 AM0comments
မိန်းမနဲ့ ယောင်္ကျား ကွာခြားချက်ကလေးတွေက ဒီလိုပါတဲ့…
Posted by AH at 8/29/2011 03:19:00 PM0comments
[အပိုင်း ၁၊ ၂၊ ၃ ကို ပေါင်းပြီး ပိုစ့်တစ်ခုထဲမှာ တင်လိုက်ပါတယ်]
“တီ တီ တီ တီ…”
ဆတ်ကနဲ သူလန့်နိုးသွားသည်။ ကျင့်သားရနေသော လက်က အလိုလိုပင် နှိုးစက်ကို လှမ်းပိတ်လိုက်မိသည်။ နာရီလက်တံက ၅ နာရီခွဲ ကို ပြနေသည်။ တင်းကျပ်နေသည်။ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်တင်းကျပ်နေသည်။ ပင့်သက်မျှင်းမျှင်း ချလိုက်မိသည်။ နွမ်းလျှနေသော ကိုယ်ကို အားယူ၍ အိပ်ယာမှထလိုက်သည်။ ခြေဖ၀ါးနှစ်ခုအပေါ် တစ်ကိုယ်လုံး၏ အလေးချိန် ကျရောက်သောအချိန်တွင် ပင့်သက်တစ်ခုပါ လိုက်ပါလာသည်။ ထိုအရာကို သတိပြုမိသောအခါ စိတ်ပျက်သည့်အနေဖြင့် နောက်ထပ်ပင့်သက်တစ်ခု ချလိုက်မိပြန်သည်။ နိုးနိုးချင်း သက်ပြင်း ၃ခါချမိသော သူ့အဖြစ်ကို သတိရသွားသည့်အနေဖြင့် နှုတ်ခမ်းတွင် လှိုင်းတွန့်တစ်ခု ဖြတ်သွားသည်။ ဒါဟာ အသက်မပါသော အပြုံးမှန်း သူသိသည်။
Posted by AH at 8/28/2011 09:21:00 PM2comments
နယူးဇီလန်က ခရီးသည်တင် သင်္ဘောတစ်စီး လှိုင်းလူးနေတုန်း CCTV ကနေ ရိုက်ထားတာပါ။ ခရီးသည် ၁၇၃၂ ယောက်၊ သင်္ဘောသာ ၆၇၁ ယောက်ပါတဲ့ အဆိုပါသင်္ဘောဟာ မီတာ ၅၀ တိုက်ခတ်တဲ့ လေတိုက်နှုန်းကြားထဲမှာ လှိုင်းတွေနဲ့ ပျော်မြူးနေပုံလေးပါ။
သင်္ဘောလိုက်ချင်တဲ့သူများ၊ သင်္ဘောစီးချင်တဲ့လူများ ဆန္ဒရှိရင် စီးနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း…….
အင်း ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း Dynamic Stabilizer တွေ ဘာကြောင့် တပ်တယ်ဆိုတာ နဲနဲလေး ပြေးမြင်မိတော့တယ်။
Source : http://www.liveleak.com/view?i=975_1283799588
Posted by AH at 8/28/2011 05:44:00 PM0comments
Posted by AH at 8/28/2011 12:57:00 PM0comments
ပထမဆုံး ချစ်သူ့ အနမ်းချွေအပြီးမှာသေဆုံးသွားတဲ့ မိန်းမပျို
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ရှိ ဘင်ဂျာမင်လို့ ခေါ်တယ့် မိန်းမပျိုကလေးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ အနမ်းတစ်ပွင့် ချွေယူအပြီးမှာဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရတော့ သူမဟာ သူမရဲ့ ကျောင်းနေဖက်ချစ်သူဖြစ်သူ ဒန်နီရန် ရော့စ်နဲ့ ရိုမန်းတစ်ဆန်တဲ့ အချိန်ကာလလေးအတွင်းမှာ ပထမဆုံး အနမ်းတစ်ပွင့်ချွေပြီးနောက် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမရဲချစ်သူ အဆိုအရ “ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခုခုစားဖို့ ဘားတစ်ခုကိုသွားခဲကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ အကြွေးဝယ်ကဒ် ကိုယူဖို့ ကျွန်တော့ အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ စကားတွေပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်အ၀မှာ အနမ်းချွေခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မီးဖိုချောင်ထဲ ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းထဲကို လာခဲ့ပြီး ဂျင်မာက ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်တော့ ဂျင်မာရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ မှေးစင်းလာပြီး သူမ ပါးစပ်မှလဲ အမြှပ်တွေ ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမ လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ရော့စ်ဟာ သူမကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်လဲ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဆရာဝန်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ အရာရာဟာ နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။
Posted by AH at 8/28/2011 12:24:00 AM3comments
သူ၏အဖိုးနှင့် ၃နှစ်သားအရွယ်(၁၉၆၅) မှာ ရိုက်ထားသော ဘားရက် အိုဘားမား
ဂျော့ ဒဗလူ ဘုရှ်၊ ၁၉၉၅ခုတွင်တွင် သူ၏ အဖေ၊ အမေနှင့် (၁၉၅၅)
Posted by AH at 8/27/2011 12:13:00 PM0comments
“ဘာလဲကွ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လူတွေပြောပြောနေတာ” ဟု မောင်မောင်က သာဒွန်းဦးဖက်သို့ လှည်၍မေးလိုက်လေ၏။
ရဲဘော်အားလုံးတွင် သာဒွန်းဦးတစ်ယောက်သာလျှင် အသိအကြားများသူဖြစ်၍ သူ့အားမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေ၏။ သို့သော် သာဒွန်းဦးကား ထိုကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိ။ ထိုကိစ္စမှာ ရွာထဲ၌ သာမှု့ နာမှု့များတွင် ဘုရားစကား၊ တရားတစကား မပြောတတ်သူတို့ ပါးစပ်အငြိမ်မနေနိုင်၍ ပြောနေကြသည့် အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဟူ၍ ယူဆခဲ့၏။ သို့ဖြစ်လင်ကစား ထိုအကြောင်းကိုသာလျှင် လူတကာ အပြောများနေကြသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ကို သိအောင် စုံစမ်းထားမိလေသည်။
သာဒွန်းဦးက “ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ လူရွေးတာကို ခေါ်တာ” ဟု ရှင်းလင်းပြလေ၏ ။
ဆိုးပေသည် သူတို့၏စကားကို နားထောင်နေရာက “တိုင်းပြည်ကို သမ္မတအုပ်ချုပ်ရတာပဲ မဟုတ်လားလို့၊ သူ့ကို ဘယ်သူက လာရွေးပေးရလို့လဲ” ဟု ၀င်၍ပြောလေ၏ ။
“သမ္မတအုပ်ချုပ်ရတာလည်း ဟုတ်တာပဲ၊ မအုပ်ချုပ်ရတာလည်း ဟုတ်တာပဲ”
“မင့်စကား ဘာလဲကွ။ အုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့နောက် မအုပ်ချုပ်ရဘူးဆိုလို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦး” ဟု ဆိုးပေက မကျေနပ်သည့် အမူအရာဖြင့် ပြောလေ၏။
“တိုင်းပြည်ကို ရှင်ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းရှိတယ်။ သမ္မတအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ရှင်ဘုရင်တို့ သမ္မတတို့အောက်မှာ လူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ သူ့ကို ရှင်ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နန်းရင်းဝန်၊ သမ္မတတအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာ ၀န်ကြီးချုပ်လို့ခေါ်တယ်။ သူက အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာ အကူအညီပေးရမယ်။”
“အာနာရှင်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးလား” ဟု မောင်မောင်က မေး၏။
Posted by AH at 8/26/2011 02:02:00 PM0comments
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်ရှိ မြို့တော် ချန်းဒူ ဟာ တစ်ရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းရဲ့ စီးပွားရေးအချက်အချာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့တွေထဲမှာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမြို့ဟာ မြို့ပြရဲ့ အလှအပတွေနဲ့ အတူ မြို့ပြရဲ့ အလှအပကို အကြည်းတန်စေတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု့တွေလဲ ရှိနေပါတယ်။
ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တရုတ်ပြည်ဟာ ရဲမေလေးများကို စကိတ်စီးပြီး ရာဇ၀တ်မှု့တွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါပြီ။ စကိတ်စီးတယ်ဆိုလို့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့… ထိုရဲမေလေးများဟာ ၁နာရီကို ၂၅မိုင်နှုန်းနဲ့ စကိတ်စီးပြီး သူခိုးဖမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ချန်ဒူးမြို့၊ တီယန်ဖု ရင်ပြင်ရဲ့ ရေပန်းများ လှပတဲ့ မီးရောင်စုံများကြားမှ စီးမျောနေတဲ့ ခရီးသွား ဧည့်သည်များဟာ အလစ်သုတ်သမားများကို အထူးဘဲ ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။ ဒါပြင် ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး မော်စီတုန်းရဲ့ ရုပ်ထုကို လာရောက်ကြည့်ရှု့ကြပြီး စတိုးဆိုင်ငယ်လေးများ၊ အမှတ်တရ အရောင်းဆိုင်လေးများ၊ စားသောက်ဆိုင်တန်းများအကြား လှည့်လည်ကြည့်ရှု့လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလို အလစ်သုတ်သမားတွေပေါလာတာကြောင့် စကိတ်စီးတဲ့ တရုတ်ရဲမေများကို နှိမ်နင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရဲမေတွေဟာ တစ်စုတစ်ဝေးထဲ ဟန်ချက်ညီညီ ကင်းလှည့်နေပြီး၊ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာလဲ ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စကိတ်ဝတ်ဆင်မထားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရဲမေတွေဟာ ၃လက်မ မြင့်တဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ သွားလာမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဒေါက်ဖိနပ်ကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ခန့်ညားမှု့နဲ့ တာဝန်ယူနိုင်မှု့စွမ်းရည်တွေကို ပိုမိုတိုးတက်စေတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
ရွှေပြည်ကြီးက ရဲမေ မမတွေကိုသာ စကိတ်ပေးစီးလို့ကတော့ လမ်းမညီတာနဲ့တင် သွားဆရာဝန်တွေ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
မူရင်း Link ကတော့ ဒီမှာပါ - http://www.weirdasianews.com/2011/08/15/chinas-cops-rollerblades-high-heels/
Posted by AH at 8/19/2011 05:20:00 PM0comments
ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်တွင် ကုန်း/ရေ နှစ်မျိုးသွား ဘက်စ်ကားသစ် ဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲ
ပြီးခဲ့တဲ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့တွင် Floating Dutchman လို့ခေါ်တဲ့ ကုန်း-ရေ နှစ်မျိုးသွား ဘက်စ်ကား ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ခရီးသည် တင်ဆောင်ပြေးဆွဲခြင်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဘက်စ်ကားရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမ်စတာဒမ်လေဆိပ် (Amsterdam’s Schiphol Airport)မှာ နောက်ထပ်ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ကူးမည့်ခရီးသည်များ လေယဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီးကြား စောင့်ရသည့်အချိန်ကို အပန်းဖြေမှု့ဖြင့် ကုန်လွန်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ လေဆိပ်အတွင်း စားသောက်ဆိုင်များတွင် စားသောက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း စသည့်တို့ထက် ပိုမိုသစ်ဆန်းတဲ့ ဆွဲဆောင်မှု့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာ လေဆိပ်မှနေပြီးတော့ အမ်စတာဒမ်မြို့ထဲကို ၀င်ပြီးတော့ “Splash Zone” လို့ခေါ်တဲ့ အထူးတည်ဆောက်ထားတဲ့ တူးမြောင်းထဲမှာ လှည့်လည်မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပြီး အဝေးပြေးလမ်းမှကြီးမှ တစ်ဆင့် လေဆိပ်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသည် Annette Fatael ရဲ့ပြောပြချက်ကတော့ “ကြာသာပတေးနေ့ ကျွန်တော်တို့ တိုရွန်တို ကနေ တဲလ်အဗစ် ကို ခရီးဆက်ဖို့ လေဆိပ်မှာ ၉နာရီလောက်ထိုင်စောင့်နေရမယ့်တူတူ အခြားသော လေဆိပ်က စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေထဲက ဒီ ကုန်း-ရေ နှစ်မျိုးသွား ဘက်စ်ကား အစီအစဉ်ကို ရွေးဖြစ်လိုက်တာပါ။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုဘဲ ဒီကြီးမားတဲ့ ဘက်စ်ကားကြီးဟာ ရေထဲကို ဆင်းသွားပါတယ်” လို့ အထူးအဆန်းအနေနဲ့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီကုန်းရေနှစ်မျိုးသွား ဘက်စ်ကားဟာ ရေပေါ်မှာ ဘက်ထရီနှင့် မောင်းနှင်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကို လေဆိပ်၊ မြို့တော်နှင့် ဒေသတွင်း အပန်းဖြေ သင်္ဘောသွားလာရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတို့က ပူးတွဲ ဖော်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
Posted by AH at 8/19/2011 01:19:00 PM0comments
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး ရေငုပ်သင်္ဘော RSS Archer ရောက်ရှိလာ
စင်ကာပူနိုင်ငံ ရေတပ်မတော် (Republic of Singapore Navy [RSN])၏ လက်ရှိအချိန်အရ နည်းပညာ အဆင့်အမြင်ဆုံးသင်္ဘော RSS Archer သည် ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(17.08.2011) က စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ စင်ကာပူရေတပ်၏ အကြီးအကဲ (Chief of Navy Rear-Admiral) “Ng Chee Peng” နှင့် အခြားသော အဆင့်မြင့် အရာရှိများသည် ချန်ဂီရေတပ်စခန်း ဋ္ဌာနချုပ်သို့ ထိုသင်္ဘော ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ ကာလ်စ်ခရိုနာ (Karlskrona)မှ ရောက်ရှိလာသည်ကို သွားရောက် ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို Archer-class boat ရေငုပ်သင်္ဘောမှာ ယခင်က ဆွီဒင်ရေတပ်မတော်ရှိ ရေငုပ်သင်္ဘော ၂စီးအနက် တစ်စီးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူရေတပ်မတော်မှ တစ်ပတ်ရစ်အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသင်္ဘောကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ ကာလ်စ်ခရိုနာတွင် အပူပိုင်ဒေသပင်လယ်ပြင်တွင် သွားလာနိုင်စေရန် မွန်းမံမှု့များပြုလုပ်ပြီးစီသည့် ပြီးခဲ့သည် ၂ နှစ်က ရေချခဲ့သည်။
Posted by AH at 8/18/2011 10:57:00 PM0comments
တရုတ်ပြည် တက္ကသိုလ်ဝင် စားမေးပွဲ၌ ခိုးချရန် ပံပိုးခဲ့သူ ကလေးမိဘများအား ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေး
တရုတ်ပြည်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (တရုတ်အခေါ် “gaokao” ဟုအသံထွက်သည်) ၌ သူတို့၏ ကလေးများ စာမေးပွဲတွင် အမှတ်များများဖြင့် အောင်မြင်စေရန် ဟန်းဖုန်းများ၊ ၀ါယာလက် နာကျပ်များ အစရှိသည့် နည်းပညာမြင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ စာခိုးချရန် ကူညီခဲ့သည့် ကလေးမိဘ ၈ ဦးကို ဥပဒေချိုးဖောက်မှု့ဖြင့် ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်း အာဏာပိုင်များရဲ့ အဆိုအရ ထိုကလေးမိဘများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထဲက ထိုစာမေးပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေ စာခိုးချလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို တိုင်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထိုအထဲမှ ကလေးမိဘ တစ်ယောက်ကတော့ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသာလေးများကို သူတို့ ကလေးတွေ စာမေးပွဲခန်းထဲတွင် ဖြေနေတုန်း အဖြေတွေကို ပြောပေးဖို့ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲ အရာရှိတွေက စာမေးပွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ မူမမှန်တဲ့ ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု့များ (abnormal radio singals) ကို တွေ့ရှိပြီး ရှာဖွေရာမှ အဆိုပါ ကူလီကူမာ ဇာတ်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်မိတယ်လို့ သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
Posted by AH at 8/17/2011 05:33:00 PM0comments
အဓိက တင်ပြချင်တာက LNG ကို သင်္ဘောများတွင် အစားထိုးလောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုလာနိုင်ခြေ များလာမှု့ကို ဖြစ်သည်။ ယခုလောလောဆယ်တွင်လည်း သင်္ဘောလိုင်းတော်တော်များများ LNG နှင့် ဒီဇယ်တွဲဖက်သုံးသော Duel-Fuel Engines စနစ်ကို အသုံးပြုရန် စဉ်းစားလာသောကြောင့် ယခုပို့စ် လေးကို တင်ဖြစ်သွားတာပါ။
LNG (Liquefied Natural Gas) ဆိုသည်မှာ မီသိန်းအထိကပါဝင်သော (CH4) ဓာတ်ငွေ့ကို သိုလှောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း လွယ်ကူစေရန် အရည်အဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းထားသော ဓာတ်ငွေ့ ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့၏ ထုထည့်ကို အပုံ ၆၀၀ ပုံ ၁ ပုံ ခန့်ဖိနှပ်သောအခါ အရည်ဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထိုဓာတ်ငွေ့သည် အရောင်မရှိ၊ အနံမရှိ၊ ဘေးမဖြစ် သည့်အပြင် သံချေးတက်ခြင်းကိုလည်း မဖြစ်စေပေ။ သို့သော် မီးလောင်လွယ်၊ အေးခဲ ပြီး ရှုရှိက်မိပါက အသက်ရှုကျပ် (asphyxia) စေသည်။
ထိုသို့ အရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အချို့သော ပါဝင် ပစ္စည်းများကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းအဆင့်လည်းပါဝင်သည်။ အမှုန်များ၊ အက်ဆစ်ပါသော ဓာတ်ငွေ့များ၊ ဟီလီယမ်၊ ရေ၊ လေးလံသော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ စသည် စသည်တို့ကို ဖယ်ထုတ်ရသောကြောင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင် ခက်ခဲမှု့များရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အများဆုံးသော ပမာဏ ရရှိစေရန်အတွက်လဲ အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေရန် (3.6 psi) အထိရောက်ရှိစေရန် -၁၆၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ အအေးခံရသည်။ LNG အဖြစ်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ဓာတ်ငွေ့သည် မီသိန်း ၁၀၀% ပါဝင်ပြီး အခြားသော ဓာတ်ငွေ့များ သန့်စင်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ LNG ရဲ့ energy density သည် CNG ထက် ၂.၄ဆ ပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော် ဒီဇယ် ၏ ၆၀% ခန့်သာရှိသည်။
LNG ထုတ်စက်ရုံများ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ကို million metric ton per annum (mmtpa) ဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ 1 mmtpa ထုတ်လုပ်နိုင်သော စက်ရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်မှု့ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံခန့်ကုန်ကျသည်။ 1 cbf/day လက်ခံပေးနိုင်သော LNG ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံခန့် ကုန်ကျသည်။ LNG သင်္ဘောတစ်စီး၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၂-၀.၃ ဘီလီယံခန့် ကုန်ကျသည်။
Posted by AH at 8/16/2011 11:13:00 PM0comments
ကိုရီယားစကားကို ပီပီသသ ပြောနိုင်ဖို့ လျှာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်တဲ့ ဗြိတိန်သူ
Photo by : Paul Tonge
Rhiannon Brooksban-Jones လိုခေါ်တဲ့ အသက်၁၉ နှစ်ရှိ အင်္ဂလန်သူလေးဟာ အွန်စောတို့ ဋ္ဌာနေ ကိုရီးယားကို တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးသော်လည်း အာနီယောစဲယောတို့မြေမှ သွားနေချင်တဲ့အပြင် တက္ကသိုလ်မှာလဲ ကိုရီးယား ဘာသာစကားကို သင်ယူဖို့ တာစူနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကိုရီးယား ဘာသာသင်ကြားတဲ့ အခန်းမှာတော့ ကိုရီးယားလို ပြောရာမှာ တော်တော်ကို အဆင်မပြေဘဲ ကိုရီးယားသံ မထွက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by AH at 8/16/2011 12:53:00 PM0comments
Posted by AH at 8/15/2011 10:55:00 PM 1 comments
Posted by AH at 8/15/2011 05:17:00 PM3comments
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပထမဆုံး တည်ဆောက်ပြီးစီး သွားတဲ့ လေယဉ်တင်သင်္ဘောကြီးပါ။ တရုတ်ပြည်ရေတပ်မတော် (People’s Liberation Army Navy’s [PLAN’s]) အတွက်လည်း ပထမဆုံး လေယဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တစ် တစ်ပတ်လောက်ကမှ စမ်းသတ်မောင်းနှင့်မှု့ (Sea Trail) ပြီးစီးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါသင်္ဘောဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ ဆိုဗီယက်လက်ကျန် သင်္ဘောကို ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင်(wikipeida တွင် ၂၀၀၁ တွင်ဝယ်ယူသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်) တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူပြီး ဆက်လက် တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၀ယ်ယူတုန်းက သင်္ဘောနာမည်က “Varyag” ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလီယန်ပြည်နယ်ရှိ သင်္ဘောကျင်းမှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲတာပါ။ တန်ချိန် ၆၇၀၀၀ ရှိပြီး မီတာ ၃၀၀ ရှည်လျှားတဲ့ conventional steam-turbine powerကို အသုံးပြုထားတဲ့ အဆိုပါသင်္ဘောဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ရေတပ်အင်အားမြှင့်တင်မှု့ကို ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by AH at 8/14/2011 05:56:00 PM0comments
သင်္ဘောများတွင် rolling ခေါ် ဘယ်ညာတိမ်းစောင်းမှု့ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ရန် တပ်ဆင်သည့် Gyroscopic Stabilizer အကြောင်းကို အနည်းငယ် တင်ပြလိုပါသည်။ စစ်သင်္ဘောများတွင် လည်းကောင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့် သင်္ဘောငယ်များ(Speed boat) တွင်လည်းကောင်း၊ ကြီးမားသော ခရီးသည်တင် သင်္ဘောကြီးများတွင် လည်းကောင်း တပ်ဆင်ကြသည်။
Gyroscopic stabilizer အကြောင်းကို မစခင် Gyroscopic Precession အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောပြလိုပါသည်။ သင်္ဘောများ၏ Gyroscopic Stabilizers များ၏ သဘောသဘာဝမှာ Gyroscopic Precession ကို အခြေခံထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Posted by AH at 8/14/2011 12:31:00 AM0comments